Semalt को साथ स्प्याम रोक्नुहोस्
वेबसाइट स्प्याम के हो?
टिप्पणी स्पाम के हो
टिप्पणीहरू स्प्यामको साथ सम्बद्ध
कसरी तपाइँको वेबसाइट मा टिप्पणी स्पाम रोक्न
इन्टरनेट स्प्याम भूमि भएको छ, र यो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको वृद्धि संग जोडिएको छैन। एक वेबसाइट प्रशासक को रूप मा, तपाईले ध्यान दिनुहुने चीज मध्ये एक स्पामिंग धेरै सामान्य छ। एकचोटि तपाईंको वेबसाइटले यातायात र श्रोताको अन्तर्क्रियाको केही स्तर प्राप्त गर्न सुरु गरे, तपाईं स्पाम याद गर्न सुरू गर्नुहुनेछ। यो टिप्पणी सेक्सनमा विशेष गरी सामान्य हो, तर तपाईं सम्पर्क फार्म स्प्याम, साइन अप स्प्याम, रेफरल स्प्याम, आदि भेट्न आउनुहुनेछ।
न केवल स्प्यामले तपाईंको वेबसाइटको एनालिटिक्स (गुगल एनालिटिक्स) मा प्रभाव पार्न सक्छ, तर यसले तपाईंको साइटको बारेमा तपाईंको आगन्तुकहरूमा खराब प्रभाव छोड्न सक्छ। सम्भवतः स्प्यामिंगलाई रोक्नको लागि सायद एक तरीका छ, तर तपाईं आफ्नो साइटमा स्प्यामिंग गतिविधिहरू सीमित गर्न साहसी कदम चाल्न सक्नुहुन्छ। तर सर्वप्रथम, तपाईंले आफ्नो साइटलाई के हुँदैछ सोच्नको लागि साथै स्प्यामको प्रकारले तपाईंको साइटलाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने कुराको नजिकबाट मनिटर गर्नुपर्दछ।
यो तपाईं स्प्यामिंग गतिविधिहरू रोक्नको लागि सही कार्य जान्न सक्षम पार्छ। यदि तपाईंलाई यो एक थकाइलाग्दो मामला फेला पार्छ वा तपाईं राम्ररी काम गर्न सक्षम हुनुहुन्न भने, तपाईंले हामीलाई यहाँ सम्पर्क गर्नुपर्नेछ Semalt। वास्तवमा, हामी तपाईंको हातहरू माथि बोझ हटाऔं र तपाईंलाई सुरुबाट नै तपाईंको साइटको मामिलाहरू सम्हाल्न मद्दत गर्दछौं। हामी स्प्यामिंग समस्या तुरुन्तै ह्यान्डल गर्छौं र निश्चित गर्दछौं कि तपाईंको साइट स्प्याम-रहित हुन्छ।
२. स्प्याम भनेको के हो?
वेबसाइट स्प्याम परिवर्तनको कुनै पनि प्रकार हो जुन तपाईंले इन्जिनियर गर्नुभएन, जुन तपाईंको वेबसाइटलाई असर गरिरहेको छ। यो दुर्भावनापूर्ण सम्बद्ध लिंक हुन सक्छ तपाइँको टिप्पणी अनुभाग मा संलग्न भइरहेको छ। यो भूत साइन-अप वा भूत सम्पर्क फाराम भरिन सक्छ। यो तपाइँको वेबसाइटको प्रोग्रामिंग कोडको अल्टरनेसन पनि हुन सक्छ। जुनसुकै प्रकारले लिन्छ, स्प्यामिंग धेरै कष्टप्रद हुन सक्छ र समान व्यवहार गर्न निराश हुन सक्छ।
स्प्यामिंग सामान्यतया मानिसबाट ईन्जिनियर गरिएका बोटहरू मार्फत हुन्छ। धेरै चोटि, तीनिहरूको लक्ष्यहरू तपाईंको साइट र धेरै अन्यको माध्यमबाट उनीहरूको डोमेनमा भ्रमणहरू (विशाल ट्राफिक) सिमुलेट गर्ने लक्ष्य राख्दछन्। स्प्यामले असन्तुष्ट आगन्तुकहरूलाई उनीहरूको विवरणहरूको साथ छलपूर्ण गतिविधिहरू गर्न प्रलोभनमा पार्न सक्छ। साथै, स्पामले उनीहरूको ट्राफिक र क्रमलाई सकरात्मक रूपमा प्रभाव पार्न सक्दछ। यो स्प्याम लि of्कको उच्च संख्याको माध्यमबाट हुन्छ जुन अन्य साइटहरूमा राखिन्छ।
अवश्य पनि, तिनीहरूको स्प्यामिming गतिविधिहरूको परिणामले उनीहरूलाई खुशी पार्छ किनकि उनीहरूसँग उच्च ट्राफिक छ। साथै, उनीहरू तिनीहरूको डोमेनमा प्रदर्शित विज्ञापनहरू मार्फत राजस्व प्राप्त गर्नेछन्। तर यो सहजीवन सम्बन्ध छैन। जबकि यो स्प्यामरको लागि फाइदाजनक छ, यो तपाईंको वेबसाइटलाई हानिकारक हुन सक्छ। यसैले तपाईंले आफ्नो साइटमा स्प्यामिंग गतिविधिहरू नोट गर्नु पर्दछ र तिनीहरूलाई हटाउने उपायहरू खोज्नु पर्दछ। टिप्पणी स्प्याम वेबसाइट स्प्यामको सब भन्दा सामान्य प्रकार भएकोले यस गाइडमा यसमा बढी जोड दिइनेछ।
Comment. कमेन्ट स्पाम भनेको के हो?
यो वेबसाइटहरूको लागि सबै भन्दा सामान्य स्प्याम हो, र यो सजिलै जेनेरिक बोट-जस्तो सन्देश (हरू) द्वारा पहिचान हुन्छ जुन वेबसाइट खण्डमा सतहहरू छन्। यदि तपाईंसँग तपाईंको पृष्ठमा अन्य टिप्पणीहरू छन् भने, तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि स्प्याम टिप्पणीहरूको प्रत्येक अन्य टिप्पणीहरूको भन्दा फरक ढाँचा छ। यो किनभने तिनीहरू प्राय: स्प्यामबॉटहरू द्वारा पोस्ट गरिन्छ। तिनीहरू छलफल भइरहेको विषयसँग सम्बन्धित छैनन्।
साथै, ती लिंकहरू समावेश गर्दछ जुन दुर्भावनापूर्ण देखिन्छ। तिनीहरू केवल एक वा दुई स्पाम टिप्पणीहरूको रूपमा सुरू हुन सक्छ, तर यदि तपाईं तिनीहरूलाई छिटो ह्याण्डल गर्नुहुन्न भने, तिनीहरू नक्कल गर्न सक्छन् जब सम्म तिनीहरूले नियमित मानवीय टिप्पणीहरू तल धकेल्दैनन्। त्यसकारण तपाईंले स्प्याम टिप्पणी र यससँग सम्बन्धित समस्याहरूबाट यसलाई बचाउनको लागि तपाईंको वेबसाइट ट्वीक गर्नु पर्छ।
Comment. टिप्पणी स्प्यामको साथ समस्याहरू
वेबसाइट स्प्यामिंगले जे लिन्छ, यो गम्भीर समस्या हो, तर टिप्पणी स्पामको साथ, नतीजा सामान्यतया धेरै देखिन्छ। यहाँ टिप्पणी स्प्यामका परिणामहरू छन्।
जब तपाईंको टिप्पणी सेक्सन स्पाम सन्देशहरूले भरिन्छ, वास्तविक मानव आगन्तुकहरू (पाठकहरू) टिप्पणी गर्ने आवश्यकता देख्दैनन्। किन? सबै तिनीहरूले देख्न असमर्थित स्प्यामी टिप्पणीहरू हुनेछन्। साथै, तपाइँको पाठकहरूले तपाइँसँग वा तपाइँको तपाइँको टिप्पणी अनुभागमा उनीहरू बीच एक वास्तविक कुराकानी गर्न सक्षम हुनेछैन किनकि स्प्याम बट्सले स्पाम टिप्पणीहरूमा फ्याँक्नेछ।
स्पाम टिप्पणीहरूले तपाइँको टिप्पणी खण्ड बनाउँदछ र, निस्सन्देह, तपाइँको वेबसाइट मा, अव्यावसायिक वा स्प्यामी देखिन्छ।
यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइटमा उनीहरूको बारेमा केहि नगरी स्पाम टिप्पणीहरू छोड्नुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाइँले स्प्यामरलाई तपाइँको आगंतुकको यन्त्रहरूलाई मालवेयरले संक्रमित गर्न "अगाडि बढ्नुहोस्" दिदै हुनुहुन्छ। यसको मतलव तपाईले यो पनि भनिरहनु भएको छ कि उनीहरू तपाईंको श्रोताहरूको जालसाजी गतिविधिहरूका लागि व्यक्तिगत जानकारी चोर्न सक्छन्।
टिप्पणी स्प्यामले तपाईंको वेबसाइटलाई सुस्त बनाउन र यसको लोडिंग गति कम गर्न सक्छ। र जब त्यसो हुन्छ, तपाईंको बाउन्स दर बढ्ने संभावना छ। यसको फलस्वरूप, यसको मतलब Google ले तपाईंको साइटलाई डे-श्रेणीकरण गर्न सक्छ।
टिप्पणी स्पामले गलत Google एनालिटिक्स डाटालाई निम्त्याउन सक्छ। र यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइटको राज्य सहि निर्धारण गर्न सक्षम हुनुहुन्न भने, तपाइँ सामग्री मार्केटिंग र समग्र राजस्व नेतृत्वमा पछाडि पर्न सक्नुहुन्छ।
माथी स्प्याम, विशेष गरी टिप्पणी स्प्याम, तपाइँको वेबसाइटलाई हानिकारक किन धेरै कारणहरू मध्ये केही छ। त्यसकारण तपाईंले स्प्याम टिप्पणीहरू तपाईंको पृष्ठमा देखा पर्न रोक्न तपाईंले सक्दो गर्नुपर्दछ। यदि तपाईं नयाँ वेबसाइटको स्वामित्व खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि यो उत्तम उपकरणहरू उपलब्ध र सुरक्षित पनि डिजाइन गरिएको छ। Semalt मा, हामी व्यक्ति र व्यवसायलाई वेबसाइटहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछौं जुन सुरक्षित र सुरक्षित छन्।
How. कसरी तपाइँको वेबसाइट मा टिप्पणी स्पाम रोक्न
टिप्पणी स्प्याम तपाइँको वेबसाइट को लागी हानिकारक छ, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त गर्न को लागी यसको छुटकाराको बारेमा जानबूझकर हुनुपर्दछ। यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन तपाईं स्प्याम टिप्पणीहरू तपाईंको साइटमा देखा पर्न रोक्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको साइटले प्रत्येक टिप्पणीलाई अनुमति दिने लिंकहरूको संख्या घटाउनुहोस्
धेरै स्पाम टिप्पणीहरूले क्लिकबाइट हेडिingsको साथ धेरै मालिसियस लिंकहरू समावेश गर्दछ मानिसहरूलाई क्लिक गर्नका लागि। यदि तपाइँ एक वा दुई लि accept्कहरू मात्र स्वीकार्नको लागि तपाइँको वेबसाइटको सेटि change परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने, टिप्पणी स्प्यामिंग कम हुनेछ। यसको मतलब यो पनि हो कि तपाईंको वैध दर्शकहरूले धेरै लिंकहरू थप गर्न सक्षम नहुन सक्छ, तर त्यो अझै पनि ठीक छ।
किन? मानवले पनि उनीहरूको टिप्पणी सेक्सनमा धेरै लिंकहरू थप्नु हुँदैन। उनीहरू उनीहरूको ब्लगको लागि ट्राफिक उत्पन्न गर्न प्रयोग गरिरहेका हुन सक्दछन्। त्यसो भए, यदि स्प्यामबट्सले तपाईंको टिप्पणी सेक्सनमा बहु लिंकहरूको साथ स्पाम टिप्पणीहरू पठाउन प्रयास गर्दछ भने, टिप्पणी मोडरेसनको लागि फ्ल्याग हुनेछ।
कालोसूचीकृत शब्दहरूको सूची सिर्जना गर्नुहोस्
धेरै स्पाम टिप्पणीहरूमा कुञ्जी शब्द वा शब्दहरूको स्ट्रि contain हुन्छ जुन सजिलैसँग स्प्याम हुन योग्यको हुन्छ। तपाईं तिनीहरूको नोट लिन सक्नुहुन्छ र तिनीहरूका लागि ब्ल्याकलिस्ट सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरीकाले, त्यस्ता शब्दहरू वा शब्दहरूको शब्दहरूको साथ टिप्पणीहरू तपाईंको टिप्पणी सेक्सनमा दृश्यात्मक देखा पर्दैन। तपाइँले केवल शब्दहरूको तारा र सावधानीपूर्वक चयन गरिएका शब्दहरू सूचीबद्ध गर्नुपर्नेछ किनभने तपाइँको कालोसूचीबद्ध शब्दहरूले तपाइँको वैधानिक श्रोताको लागि समस्या सिर्जना गर्ने छ जब उनीहरू टिप्पणी गर्न चाहन्छन्।
केवल पंजीकृत प्रयोगकर्ताहरूमा टिप्पणी गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुहोस्
केवल दर्ता प्रयोगकर्ताहरूलाई टिप्पणी गर्न अनुमति दिनु भनेको टिप्पणी स्पाम रोक्नको एक प्रभावकारी तरीका हो। किन? स्प्यामबट्स तपाईंको साइटमा प्रयोगकर्ताको रूपमा दर्ता गर्न सक्दैन। किनभने तिनीहरू दर्ता प्रयोगकर्ताहरू छैनन्, तिनीहरू तपाईंको वेबसाइटमा टिप्पणी गर्न सक्दैनन्। यो विधि तपाइँको सक्रिय श्रोतालाई मापन गर्ने तरिका पनि हो।
यो किनभने टिप्पणी मात्र गर्न उत्सुक मानिस वा तपाइँको बारम्बार साइट आगन्तुकहरु व्यक्ति रेजिष्टर गर्न समय लिने छ। त्यसोभए, तपाईंको लागि यो विधिले दुई चरालाई मार्न ढु stone्गाको प्रयोग गरिरहेको छ। तपाइँलाई थाहा हुनुपर्दछ, यद्यपि तपाइँका सबै वेबसाइट आगन्तुकहरूले दर्ता गर्न समय लिने छैनन्। किनभने तिनीहरू दर्ता नगरी टिप्पणी गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूले टिप्पणी गर्न कष्ट दिँदैनन्। यसले तपाईंलाई कुनै समस्या हुने छैन, यद्यपि तपाईंले टिप्पणी स्प्याम रोक्नको आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नुभएको छ।
एक टिप्पणी मोडरेसन प्रणाली सेटअप गर्नुहोस्
कमेन्ट मोडरेसन प्रणाली सेट अप गर्नु भनेको तपाइँको वेबसाइटमा देखा पर्नु अघि तपाइँले केही वा सबै टिप्पणीहरू जाँच गर्नुपर्दछ र प्रमाणित गर्नु पर्छ। व्यक्ति वा पोष्ट द्वारा पोष्ट गरिएको टिप्पणीहरू तपाईंले समीक्षा नगरेसम्म पेन्डि be हुनेछ। यो रणनीति प्रभावकारी छ किनकि तपाईं सजिलैसँग स्पाम टिप्पणीहरू याद गर्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई तपाईंको वेबसाइटमा औपचारिक रूपमा देखा पर्नु अघि उनीहरूलाई मेटाउनुहोस्।
एक टिप्पणी मोडरेसन प्रणाली अपरेटिंग कठिन हुन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाइँसँग समीक्षाको लागि धेरै प्रतीक्षा गरीरहेका छन्। त्यसोभए, तपाईं यो रणनीति अपनाउने मात्र छनौट गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग यसको कठोरताहरू ह्यान्डल गर्न समय र शक्ति छ भने। साथै, तपाईंको आगन्तुकहरू बीचको अन्तरक्रिया सहज हुनेछैन किनकि टिप्पणीहरू देखा पर्न सक्दैन जब सम्म तपाईं उनीहरूलाई स्वीकृति दिनुहुन्न।
तपाईंको साइटमा एन्टि-स्प्याम प्लग-इन संलग्न गर्नुहोस्
तपाईं आफैले स्प्याम टिप्पणी समस्या ह्यान्डल गर्नुको सट्टा, तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा एन्टी-स्प्याम प्लग-इन स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। प्लग-इनले स्पाम टिप्पणीहरू हटाएर वैध व्यक्तिहरूलाई पछाडि छोडिनेछ। तपाईंले एक शक्तिशाली प्लग-इन छनौट गर्नुपर्नेछ जुन स्प्याम टिप्पणीलाई पछाडि नराखीकन केही वैध व्यक्तिहरूलाई बाहिर नदेखी टिप्पणीहरू फिल्टर गर्न पर्याप्त सक्षम हुनेछ।
यो तपाइँको प्राथमिकता अनुरुप अनुकूलन योग्य हुनु पर्छ। एन्टी-स्प्याम प्लग-इन प्रयोग गर्नु स्प्याम टिप्पणी मुद्दासँग व्यवहार गर्ने पनि एक प्रभावकारी तरीका हो। साथै, तपाईं अन्य चीजहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ तपाईंको साइटको सुधार गर्न तपाईंको टिप्पणी सेक्सनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा।
स्पामले चाँडै तपाइँको साइट लिन र यसलाई अव्यावसायिक/स्प्यामी देखिन सक्छ। यसले तपाइँको आगन्तुकहरु लाई रोक्न सक्छ। साथै, यसले तपाईंको वेबसाईट एनालिटिक्स डाटालाई प्रभाव पार्ने क्रममा तपाईंको साइटलाई बिस्तारै लोड गर्न सक्छ। यस कारणका लागि, तपाईंले आफ्नो वेबसाइटको स्पाम मुद्दा ढिलो गर्न दिनुहुन्न। तपाईंको साइटको समग्र प्रदर्शन सुधार गर्न यसलाई छिटो रोक्न कोसिस गर्नुहोस्। सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् Semalt तपाइँको वेबसाइटको स्प्याम समस्याको छिटो र स्थायी समाधान फेला पार्न।